Lalàna · Septambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Septambra, 2009
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Septambra, 2009
Ejipta08 Septambra 2009
Lohatenim-baovao maro indray no nampiseho an'ity mpahay lalàna Ejipsiana maha-be resaka ity. Eto indray dia ny niovany finoana ho kristiana no anton-dresaka. Mitantara ho antsika i Marwa Rakha.
Maraoka: niseho masoandro ny fampiasana zaza
Maraoka08 Septambra 2009
Misy zazavavy tsaboina noho ny ratra sy daroka nahazo azy ao amin'ny hopitaly. Tsy mahalala endri-piainana hafa ankoatra izay iainany ankehitriny i Zineb Chtit rehefa nalefa hiasa ho mpanampy an-trano tamin'ny faha-10 taonany, miasa amina mpanankarena sady midaroka no tsy manome hanina.